SHARAD CHIRAG – ONLINE | Personal page of Sharad Chirag Adhikaree
SHARAD CHIRAG – ONLINE
Personal page of Sharad Chirag Adhikaree
जेठी सासुको हिमाल यात्रा
Posted on November 13, 2013 by Sharad Chirag	Reply	शरद चिराग
पसिनाको सावरले निथु्रक्क पारेका लुगा छोडाउँदै थियौं हामी । झन्डै तीन हजार मिटरको उचाइमा होटल माछापुच्छे्र एन्ड सम्झना रेस्टृुरेन्ट नामको हस्तलिखित साइनबोर्ड झुन्ड्याइएको टहरो नीलो आकाशतिर फर्केर टुसुक्क बसेको थियो । त्यसैको आँगनमा राकेश श्रेष्ठ भिजेका लुगा घाममा सुकाउँदै थियो । दिउँसोको १२ बज्न लागेको थियो र मेरो टपलेस ज्यानबाट पसिना बाफ बनेर आकाशमा उड्न थालेको थियो । सगरमाथा आधार शिविरसम्म पुगेको ज्यानलाई त्यो जाबो तीन हजार मिटर उचाइमा नागिंन कुनै समस्या थिएन । तर अहो, जम्मा दुई घन्टाको उकालोले पनि कति बोसो पगालेछ !
अचानक खैरो कपाल भएकी एउटी युवती पोलोराइड सनग्लासले आधा अनुहार छोपेर हामीतिर दु्रतगतिले दौडिँदै आई । ‘ल, जेठी सासु आइन्’ ह्यारी शर्माले भन्यो । आफ्नो टपलेस ज्यानको लाजबाट जोगिन मैले उधारोमा लिएको एकथान सनग्लास भिरें ।
हामी बसेको टेबलछेउ आएर उसले सोधी, ‘के मार्दी हिमाल आरोहण सजिलै गर्न सकिन्छ ?’ हामीलाई हिमाल आरोहणको अनुभव थिएन । सुनवलको ह्यारी शर्माले केही टाकुरा त चढेको थियो, तर त्यसलाई हिमाल भनिहाल्न मिल्दैन भन्ने राकेशको ठहर थियो । जे होस् पर्वतारोहण र पदयात्रा फरक हो भनेर हामीले ‘जेठी सासु’लाई बताइदियौं । आफूलाई पोखराकै सबैभन्दा चलाख ठान्ने एउटा भरिया कम गाइडले हिमाल आरोहण नै गराउँछु भनेर बिचरी सासुलाई गफ दिँदो रहेछ । त्यसैले तिनी हामीसँगको एक दिन पुरानो नाता सम्झेर आफ्नो गाइडको भेरिफिकेसन गर्न आएकी रहिछन् । तिनले हाम्रो पदयात्रा योजना सुनिन् र केही दिनको सहयात्री भयौं भन्दै हाई क्याम्पको उकालो चढ्न थालिन् ।
हो, जेठी सासुसँग ह्यारीको जम्मा एक दिन पुरानो नाता थियो । जम्मा तीन घर भएको फरेस्ट क्याम्पको एउटा होटलको डाइनिङ रुममा हामी अघिल्लो साँझ स्पानिस कार्ड गेम ‘बुर्रो’ खेल्न भेला भएका थियौं । जेठी सासु पाँच सदस्यीय टोलीकी प्रमुख थिइन् । स्पेनमा जन्मेका हौं भनेर उति गर्व नगर्ने यो टोलीको विशेषता यसमा चारजना युवती हुनु नै थियो । टोलीमा बायो मेडिकल इन्जिनियरिङ पढेर अमेरिकाको न्युयोर्कमा बिजनेस एनालिस्टको काम गर्ने एकमात्र पुरुष सदस्य थियो । घना जंगलको शून्यताले तर्सिएर होला त्यो केटो आवाज गुमाएझै शान्त देखिन्थ्यो ।
हाम्रो टोलीमा चाहिँ ‘सर्वथा अविवाहित’ तीन लक्का जवान थियौं । हामीले आफ्नो टोली नेता चुनेका थिएनौं । ह्यारी शर्मालाई आफ्नो हस्की आवाजमाथि खुब गर्ब छ । त्यसैले सधैं उसको भनाइ एउटै रहन्थ्यो, ऊ नै निर्विकल्प टोली नेता हो । राकेश र म कहिलेकाहीं मात्रै त्यसमा सहमत भइदिन्थ्यौं ।
सानो डाइनिङ टेबलमा हामी आठ थान मानिस भेला भएका छौं । दसैंझरीले भिजाएका लुगा चुलोको आगोमा सुकाउँदै हामीले अपरिचयको पर्दा उघार्‍र्यौं । खैरो कपाल हुने युवतीले भनी, ‘मेरो नाम लाउडा ।’ अकस्मात् मैले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्भिmएँ । उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा लाउडा काण्ड चर्काएर एमालेले सडक आन्दोलन गरेको थियो । नेपाली राजनीतिसँग यसरी जोडिएको नाम भएकी केटीको नाम कसरी बिर्सन सकिन्छ ?
दोस्री केटीले चस्मा लगाएकी थिई । अलि कम बोल्थी । ह्यारी शर्माको आडैमा बसेकी उसले मसिनो स्वरमा भनी— ‘म ब्ल्यान्का ।’ मैले ‘कासाब्लान्का’ सम्झें । उसले भनी मोरक्कोको सहर त मलाई मन पर्दैन, तर फिल्मचाहिँ राम्रो छ है । यो केटीको नाम पनि सम्भिmने भइयो । तेस्री केटी तुलनात्मक रूपमा कम सेक्स अपिल भएकी मध्ये पर्थी । उसले भनी, ‘म भिक्टोरिया ।’ ‘ह्वाट ? भिक्टोरिया सिक्रेट ?’ र, हामी सबै हाँस्यौं । अब अर्कीको पालो थियो । तर मलाई लाग्यो, यो केटीको नाम जति अप्ठेरो भए पनि सम्भिmन सकिन्छ । किनभने टोलीकी पटाखावाली उही थिई । सबैभन्दा मिठो हाँसो उसैको थियो । सबभन्दा राम्री उही थिई । त्यसैले यति धेरै अपिल गर्ने केटीको नाम सम्भिmन फिल्मको अथवा कुनै अन्र्तवस्त्रको ब्रान्डको सम्झना हुन जरुरी छैन । एस्टरको नाम मेरो मुटुमै गढियो । तर, त्यो टोलीको अन्तिम पात्र बायोमेडिकल इन्जिनियर ‘अनाम’ छ । हामीले उसको नाम सम्भिmन सकेनौं । एक हप्ता लामो पदयात्रामा हामीलाई लाग्यो, यो केटो फिल्ममा झुलुक्क अनुहार मात्रै देखिने पात्र हो ।
अघिदेखि ह्यारी शर्मा र कासाब्ल्यान्काको खासखुस चलिरहेको थियो । जर्मन सहयोग नियोग -जीआईजेड)का लागि एउटा रिसर्चमा काम गरेको ह्यारी शर्मा र त्यही संस्थामा इन्टर्न गर्ने क्यासाब्लान्काको कुरा मिल्यो । ह्यारीलाई देसी अफेयर्सको प्रशस्त अनुभव थियो । तर अब ऊ इन्टरनेसनल अफेयर्समा रुचि राख्न थालेको थियो । त्यसैले औधि खुसी देखिन्थ्यो, मानौं उसले वर्षौंदेखि खोजेको सोलमेट भेटेको थियो ।
त्यही साँझ हामीले थाहा पायौं, लाउडा र कासाब्ल्यान्का दिदीबहिनी रहेछन् । बर्लिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुअघि चार महिनाको इन्टर्नका लागि क्यासाब्ल्यान्का नेपाल आएकी रहिछन् । बहिनीलाई भेट्ने र पदयात्रामा जाने गरी आफ्ना साथीहरूको संयोजन लाउडाले गरेकी रहिछन् । जतिबेलादेखि हरिले क्यासाब्ल्यान्काको मन चोर्‍यो, लाउडा उसकी जेठी सासु भइहालिन् । प्राविधिक कारणले राकेश हरिजत्तिको एक्साइटेड हुँदैनथ्यो । त्यो उसको बाध्यता थियो कि के थियो उही जानोस् । तर मलाई सजिलो भएको थियो कम्तीमा ह्यारी शर्मा उर्फ हरिप्रसाद कासाब्ल्यान्कासँग निकट थियो र पटाखावालीलाई पट्याउने सुनौलो अवसर मलाई थियो ।
जेठी सासु बार्सिलोना बस्थिन् । उनी साइकाटि्रक थिइन् । पटाखावालीको अस्थायी बसोबास स्विट्जरल्यान्डको जुरिच थियो । वातावरणीय कानुन पढेकी ऊ स्विट्जरल्यान्डमा प|mान्सेली भाषा सिक्न वेटरको काम गर्छु भन्थी । स्पानिससँग कसरी कुरा अघि बढाउनु ? मैले सुरथको बास्सा फालें फूर्तिसाथ, ‘म बार्सिलोना क्लबको फ्यान हुँ नि । मेस्सीको नामको ओरिजनल जर्सीको मालिक पनि हुँ ।’
‘आई हेट फुटबल’ मलाई विश्वासै भएन, यसो भन्ने पटाखावाली नै हो भनेर । यही फुटबलको कुरोबाट मेलो अघि सर्ला भनेको मोरीले बडो राष्ट्रवादी भएर भनी, ‘हाम्रा खेलाडीहरू लाखौं युरो कमाउँछन् । तर त्यसको कर तिर्नुपर्ला भनेर स्विस बैंकमा जम्मा गर्छन् । अब देशलाई केही फाइदा हँुदैन भने बेकारमा किन तिनको फ्यान हुने ।’ त्यसपछि कुरो राजनीतितिर मोडियो । संसारभरिकै राजनीतिज्ञहरूको साझा गुण ‘ढाँट्नु’ हो भन्ने तिनीहरूको राय थियो । ती आफ्नो देशको बेरोजगारीदरदेखि त्रसित थिए । जर्मनहरू त्यतिका धनी छन्, प|mेन्चहरू पनि धनी नै छन् । स्पेन तिनीहरूभन्दा पछि पर्नुमा गतिला राजनीतिज्ञ नहुनु नै हो भन्ने तिनको ठम्याइ थियो । तर जब कुरा अर्थतन्त्र र क्लाइमेट चेन्जतिर गयो, ह्यारी शर्मा नामको बाढीले धेरैलाई बगायो । तर पटाखावाली र म दुईजनाचाहिँ किनारमा बसेर अरू बगेको हेरिरहेका थियौं । उसका र मेरा धेरै कुरा मिल्थे, शिवाय फुटबल । एकचोटि जब हाम्रा आँखा चार भएका थिए, मैले उसको ओठमा मुस्कान देखेको थिएँ ।
बिहानको साढे ६ बजेको छ । ४१ सय मिटर उचाइको हाई क्याम्पबाट हामी मार्दी हिमाल आधार शिविरतिर उक्लिरहेका छौं । मौसम बडो बेइमान भइदियो । पदयात्राको अघिल्ला दिनमा पनि हामी पानीले गोदियौं । आज पनि मौसम पूरै खुलिसकेको छैन । तर बेसक्याम्प पुगुन्जेल खुल्ला कि भन्ने आशा छ । रुकस्याकमा पानी, अन्डा, चपाती रोटी र केही स्निकर्स बोकेका छौं । ह्यारी शर्मा र म अघिअघि छौं । राकेश अलि ढिलो आउने मुडमा छ । एकैछिन अघि उसले ‘भो, मौसम खुल्लाजस्तो छैन । यतैबाट फर्किऊँ’ भनिसकेको छ ।
राति बास बसेको हाई क्याम्पभन्दा हामी झन्डै तीन घन्टाजति हिँडिसक्यौं । एउटा याक खर्कमा आराम गरिरहेका बेला जेठी सासुको समूह स-भरिया आइपुगे । पोर्टर कम गाइडलाई आफ्नो अंग्रेजीमाथि बडो दम्भ थियो । उसले बि्रटिस एक्सेन्टमा घोषणा गर्‍यो, ‘फाइनल्ली वी आर हिय, दिस इज द मार्दी हिमाल बेस क्याम्प ।’ यो पोर्टर कम गाइडको कुरामा हामीलाई पत्यार थिएन । याक खर्क र बेसक्याम्प फरक हुन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो । पटाखावाली र मेरो आँखा जुध्यो । निःशब्द । हामी अझै उक्लियौं । जेठी सासुको समूहले हामीलाई पछ्यायो । बल्ल पो ‘अपर भ्यू प्वाइन्ट’ आइपुग्यो । हामी झन्डै पैंतालीस सय मिटरको उचाइमा थियौं । हाम्रा होटलवाला सुदीप गौतमले सुनाएका थिए, ‘मौसम खुल्यो भने भ्यू टावरबाट हेर्दा अन्नपूर्ण बेसक्याम्प तल देखिन्छ । यो क्षेत्रमै दृश्यको हिसाबले सबैभन्दा उत्तम पदयात्रा यही हो ।’ तर हाम्रो दुर्भाग्य मौसम खुलेको थिएन । मेरी पटाखावालीको मुस्कान पनि खुलेको थिएन । जेठी सासु पनि धुम्म थिइन् । उनीहरूले फर्किने निधो गरे । अन्ततः राकेश श्रेष्ठ पनि तिनकै पछि लाग्यो ।
ह्यारी शर्मालाई मनास्लु ट्रेकको लार्के पास गरेको जोस थियो । मलाई सगरमाथा आधार शिविरको । अब जाबो मार्दी हिमालको बेसक्याम्प पत्ता नलाई के फर्किने ? हामी दुईले निधो गर्‍यौं, ‘मौसम खुलेनछ भने पनि कम्तीमा बेसक्याम्पमा पुगेर फोटो खिचेर आउने ।’ हामीले बोइल गरेर ल्याएका एक/एक थान अन्डा र चोक्लेटले अलिकति शक्ति जम्मा गर्‍यौं, बेसक्याम्पसम्मको उकालोका लागि ।
आकाशमा गड्याङगुडुङ सुनिँदै थियो । हिमपहिरो थियो कि चट्याङ परेको, त्यसबारे सोच्ने फुर्सद थिएन । १० मिटरअगाडि पनि केही नदेखिने बाक्लो हुस्सु थियो । रेनकोट ओढेर बेसक्याम्प पहिल्याउन पहाड उक्लिँदै थियौं । हामी एउटा डरलाग्दो ढुंगेभीर पार गरेर अगाडि पुगेका थियौं, बाटो बन्द भयो । बिहानको साढे ११ बजेको हुँदो हो, तर हुस्सुले गर्दा हिमालको त्यो काखमा हामीलाई झमक्कै साँझ पर्न लागेको जस्तो आभास भयो । हामीले कतै बाटो हरायौं कि भनेर नक्सा खोज्यौं, त्यो होटेलमै छुटेछ । अब हिउँ पर्न थालेको थियो र हामी भोकले रन्थनिन थालेका थियौं । कुनै उपाय थिएन । बेसक्याम्प नदेखी बास बस्ने थलोतिर फर्किनुको कुनै विकल्प थिएन । हामी दुई भाइ बडो दुःखित थियौं ।
झन्डै तीन घन्टाको कठिन ओरालोपछि बल्ल हाई क्याम्पको टहरे होटल आइपुगियो । तर जब हाम्रा हुटेलसाहूले हाम्रो कहानी सुने । हामीले सारा दुःख बिर्सियौं । उनले भने, ‘तपाइर्ंहरू त झन्डै दोस्रो क्याम्प पुग्न लाग्नुभएको रहेछ । हिमालबाट ढुंगा खस्ने ठाउँ पनि पार गर्नुभएको रहेछ । धन्न केही भएनछ, त्यसरी ढुंगा खस्ने भीरसम्म जानु निकै जोखिमपूर्ण छ ।’ तर बेसक्याम्पचाहिँ कहाँ छ त ? बेसक्याम्प भ्यू टावरको केही माथि पर्दो रहेछ । चौंरी गोठालाहरूले त्यसको साइनबोर्ड मेटिदिएका रहेछन् । त्यसैले हामीले ठम्याउन नसकेका रहेछौं ।
ह्यारी शर्मालाई लाग्यो, हामी साँच्चिकै हिरो हौं । अब यो फिल्ममा हामीलाई दुइटी हिरोइनको जरुरत छ । हामी जेठी सासुको समूहमा मिसियौं । अरे ! राकेश श्रेष्ठ पो हिरो छ त । फोटो इमेल गर्दिन्छु भन्ने सर्तमा केटोले हामी दुई भाइलाई निकै पछि छोडिसकेछ । त्यसैले ऊ हामीलाई हिमालमा दुःख पाउन छोडिदिएर यता फर्केको रहेछ । त्यो दिन जेठी सासुको समूह स्पानिसमा कुरा गर्दै थिए । पटाखावालीले मलाई पूरै उपेक्षा गरी । कम्तीमा एउटा मुस्कानको त हकदार थिएँ । त्यो पनि पाइएन । मलाई त्यो रात पटक्कै निद्रा लागेन । भोलिपल्ट उनीहरू तातोपानी नुहाउन जाँदै थिए, हामी तीन भाइ सिदिङ, घलेल हुँदै पोखरा फर्किंदै थियौं । तिनले फर्केर काठमाडौंमा भेटौं भने । राकेश र ह्यारी बडो उत्साहित थिए । ह्यारी शर्माले आफ्नो घरमा ‘मार्दी हिमाल सक्सेस पार्टी’ को घोषणा गर्‍यो । ती छुट्टएिपछि उसले सुनायो, पटाखावाली ऊसँग पट्टइिर् । मैले नबुझ्ने गरी उसले थोरबहुत शारीरिक आत्मीयताको पनि कुरा गर्‍यो । राकेश र ह्यारीको खुब मिल्ती थियो । ती बलिउडको कुनै गीतमा नाच्ने हिरोहरूझंै प्रफुल्ल थिए । मलाई भने लाग्यो, म फेरि सलमान खान भएँ । ‘कुछ कुछ होता है’मा आफूले बिहे गर्न ठिक्क पारेकी केटीलाई शाहरुख खानको हातमा राखिदिएजस्तो ।
पुनश्च, काठमाडौं फर्केर जेठी सासुले, पटाखावालीले, क्यासाब्लान्काले, भिक्टोरिया सिक्रेटले हामी कसैलाई फोन गरेनन् । इमेल गरेनन् ।
Posted in travel/adventure	| Tagged trekking	| Leaveareply
Posted on May 4, 2013 by Sharad Chirag	Reply	धेरै वर्षपछि शम्भु सरलाई भेटें । १५ वर्षपहिले देखेभन्दा दुब्लाउनुभएछ । अनुहारको तेज पनि पहिलेजस्तो थिएन । धादिङबेसीको सडकमा मेरो नमस्ते उहाँले अचम्मलाग्दो गरी नरम भएर फर्काउनुभयो । दुई पाइला अघि के बढेको थिएँ, उहाँले भनेको सुनेँ, ‘ए, तँ पो ! कहिले आइस् ?’ म फर्किएँ । आफूलाई पढाउने गुरुलाई सबै विद्यार्थीले चिन्छन्, तर आफूले पढाएका हजारौं विद्यार्थी सबैलाई सम्भिmन, चिन्न गुरुलाई त्यति सजिलो हुँदैन । सुरुमा उहाँले नचिनेरै नमस्ते फर्काउनुभएको रहेछ । स्कुल छोडेको झन्डै १५ वर्षपछि भेट्दा पनि उहाँले मलाई चिन्नुभो । म गद्गद् भएँ । बितेका १५ वर्षमा उहाँको तुलनामा धेरै परिवर्तन त ममा आएको छ । उहाँमा पनि आएको छ, रिटायर्ड हुनुभएको छ । शरीर पहिलेजस्तो छैन । यो सब याद गरिरहँदा सोध्नुभयो, ‘तेरो बाउको के छ ? आजकाल केही किताब पढ्दैन कि के हो ?’ अहिले आधि समय काठमाडौं र आधि समय धादिङ बस्ने शम्भु सरको यो प्रश्नले मलाई बाल्यवयमा फर्काइदियो ।
नीलकण्ठ उच्च मावि सदरमुकामको स्कुल मात्र थिएन, धादिङ जिल्लाभरिकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्ने स्कुल पनि थियो । बोर्डिङ स्कुलहरू प्राथमिक तहसम्म मात्र थिए । त्यसैले जिल्लाभरि सबैभन्दा राम्रो पढाइ हुने स्कुलका रूपमा यसको नाम थियो । हरेक वर्ष एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको प्रतिशतले पनि यही भन्थ्यो । एसएलसीमा अरू स्कुलका विद्यार्थीले टप गरे भने, ‘लौ नीलकण्ठको पढाइ बिगि्रयो’ भनेर मानिसहरू कुरा गर्थे । भलिबल अथवा हाजिरीजवाफमा यसले जितेन भने पनि मानिसहरू किन जितेन भनेर चिन्तित हुन्थे । यही स्कुलमा मैले १० वर्ष बिताएँ ।
शम्भुकुमार श्रेष्ठ हेडसर हुनुहुन्थ्यो । साह्रै कडा । औसतभन्दा मोटो शरीर, खुइलेको तालुले उहाँको व्यक्तित्वलाई अझ ‘भयानक’ बनाउन सघाएको थियो । स्कुल पढुन्जेल मैले कहिल्यै उहाँलाई सीधा हेर्ने हिम्मत जुटाउन सकिनँ । उहाँसँग बोल्नुपर्दा हामी विद्यार्थी थरथर काप्थ्यौं । हामी मात्र किन, सारा स्कुल शम्भु सरदेखि आतंकित थियो । उहाँले डिल्लीरमण शर्मा अर्याल गुरुबाहेक अरू कसैलाई पनि तपाईँ भन्नुहुन्न भनेर हाम्रा सिनियरहरू सुनाउँथे । हामी आफैंले चाहिँ सरहरूका वार्तालाप कहिल्यै सुनेनौं ।
शम्भु सरबारे अनेकन कथा बनेका थिए, तर हरेक कथाले उहाँलाई ‘भयानक डरलाग्दो’ रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्थे । कति जनाले उहाँको एक थप्पडमै पाइन्ट भिजाएका हामी आफैंले देखे सुनेका थियौं । चार पाँच कक्षा पढ्दाताका एकजना खतरनाक दादा काठमाडौंदेखि १० कक्षा पढ्न आएको थियो । शम्भु सरले उसको दादागिरी धेरै दिन टिक्न दिनुभएन । केही महिनामै स्कुल छाड्नेबेला उसले भन्थ्यो रे, ‘शम्भु सरलाई कुट्न सक्ने भएपछि मात्रै धादिङ फर्किन्छु ।’ तर शम्भु सरले कुटाइ खाएको हामीले कहिल्यै सुनेनौं ।
हामी माध्यमिक तहमा पढ्ने बेला शम्भु सर ‘रेगुलर टिचर’ हुनुहुन्थेन । त्यत्रो स्कुललाई व्यवस्थापन गर्ने र जिल्लाकै नामी स्कुल बनाउने जिम्मेवारीले उहाँलाई व्यस्त बनाउँथ्यो होला । अरू शिक्षक नआएका बेला चाहिँ पढाउन आउनुहुन्थ्यो । उहाँ अंग्रेजी पढाउनुहुन्थ्यो । कोही विदेशी आयो भने अंग्रेजीमा कुरा गर्न सक्ने शम्भु सर र उमेद प्रधान दुईजना मात्र हुनुहुन्थ्यो भन्ने स्कुलमा चर्चा हुन्थ्यो । जे होस्, शम्भु सरको कक्षा जत्तिको शान्त मैले कहिल्यै अनुभव गर्न पाएको छैन ।
वेदप्रकाश शर्मा, सुरेन्द्रमोहन पाठक, ओमप्रकाश शर्मा, समीरजस्ता लेखकका पल्प फिक्सन नेपालमा नपाइँदो हो त मैले शम्भु सरको यस्तो भयानक व्यक्तित्वसँग तीन कक्षामै साक्षात्कार गर्नुपर्दैनथ्यो होला । मेरो बुवा अदालतमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो । अझै हुनुहुन्छ । बुवाले काठको सानो दराज बनाउनुभएको थियो— किताब राख्न । उहाँ हिन्दी पत्रिका र उपन्यासहरू खुब पढ्नुहुन्थ्यो । गुल्सन नन्दा, राजहंस, ओमप्रकाश शर्मा, मनोज, समीर, सुरेन्द्रमोहन पाठकजस्ता हिन्दीका पकेट बुक राइटरहरूलाई मैले बुवाको दराजमा पहिलोपटक भेटेको हुँ । जेम्स हेड्ली चेजका हिन्दीमा अनुदित उपन्यास पनि त्यहीँ हुन्थे । सरिता, सरस सलिल र कादम्बिनीजस्ता पत्रिका पनि दराजमा थिए । तर त्यहाँ सबैभन्दा धेरै उपन्यासचाहिँ वेदप्रकाश शर्माकै थिए होलान् ।
एक दिन बुवाले भन्नुभयो, ‘तेरो शम्भु सरलाई यो किताब दे है ।’ शम्भु सरलाई कसरी किताब दिने ? ‘नाइँ मलाई डर लाग्छ ।’ मैले भनें ।
‘त्यसो भए नबोली दे,’ बुवाले भन्नुभयो ।
यसको केही घन्टापछि म शम्भु सरको कोठाको झ्याल अघिल्तिर उभिएको थिएँ, थरथर काप्दै । ‘बाउले किताब पठाइदियो ?’ उहाँले सोध्नुभो । केही नबोलेरै मैले काँपेका हातले किताब अघि बढाएँ । ‘क्लासमा जा’ शम्भु सरले यत्ति भन्नुभो । म बेतोडले दौडिएँ, मानौं झ्यालखानाबाट फर्किरहेको छु ।
तर यस्तो खुसी धेरै दिन टिकेन । केही दिनपछि म फेरि शम्भु सरको झ्याल अगाडि उभिन जानुपर्‍यो । यसपटक शम्भु सरले किताब फिर्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो । म केही बोलिनँ । मात्र कापिरहेँ । शम्भु सरको उही परिचित रवाफ सुनेँ, ‘यो किताब बाउलाई लगेर दे ।’ म बेतोडले दौडेँ । लागिरह्यो, शम्भु सरको स्वरले मलाई लखेटिरहेछ । जब घरनजिक पुग्न लागें, किताबका पाना सर्रर पल्टाएँ । अन्तिम अन्तिम पानातिर पाँच रुपैयाँको नयाँ नोट थियो । दसैंमा पाइनेजस्तो नयाँ । त्यो मेरो तीन दिनको खाजा खर्च थियो । मैले नोट खल्तीमा हालें । पाँच रुपैयाँको कुरा किस्सा मैले कहिल्यै बुवालाई भनिनँ । अहिलेसम्म पनि ।
शम्भु सरको झ्याल अघि उभिने क्रम आठ कक्षा पढुन्जेलसम्म निरन्तर रह्यो । त्यतिबेला पाँच रुपैयाँको सट्टा किताबका पानामा दस रुपैयाँ भेटिन थालेको थियो । सुरु सुरुमा बुवाले थाहा पाउनुहोला भनेर खुब डर लाग्यो । तर बुवाले यसबारेमा कहिल्यै केही भन्नुभएन । शम्भु सरले पनि सोध्नुभएन । सरले किन पैसा त्यसरी किताबको बीचमा राख्नुभएको होला भन्ने कुतूहलता भने जागिरहन्थ्यो । धेरै पछि मैले अनुमान गरें, पक्कै त्यो नोटलाई सरले बुकमार्क बनाउनुभएको थियो होला ।
आठ कक्षा पुगेपछि म पनि उपन्यास पढ्न सक्ने भएँ । कम्तीमा मलाई त्यस्तो लाग्यो । एक दिन बुवाले पत्तो पाउनुभो । त्यस दिनपछि हुलाकी बन्ने कामबाट मैले छुट्टी पाएँ । उपन्यास भरिएको दराजमा ताल्चा लाग्यो । सायद बुवालाई लाग्यो होला, उपन्यास पढ्न छोराको उमेर पुगिसकेको छैन ।
एसएलसीको तयारी गरिरहँदा बुवाले एक दिन भन्नुभो, ‘शम्भु दाइले ट्युसन पढाइदिन्छ रे, भोलिदेखि जा । बिहानै पाँच बजे ।’ शम्भु सरले कसैलाई ट्युुसन पढाएको मलाई थाहा छैन । बुवाको आग्रह टार्न नसकेर हुन्छ भन्नुभएको रहेछ । पहिलो दिन नै भन्नुभयो, ‘मैले ट्युसन पढाएको कसैलाई नभन् नि ।’ तर एक महिनामा मैले जम्मा छ दिन उहाँसँग पढें । उहाँ कहिले काठमाडौं, कहिले चितवन कहिले कहाँ गइरहनुहुन्थ्यो । तर शम्भु सरको डरसँग पढेका ती छ दिन म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ ।
म एसएलसी दिएर फुर्सदमा थिएँ । बुवाको कोठाको दराज फेरि खुल्यो । अझै पनि हिन्दी उपन्यास पढ्न मनाही नै थियो । मैले ‘माधवी’बाट उपन्यास पढ्न सुरु गरें । तर बुझे पो । ‘मुझे चाद चाहिए’ सकें । ‘कादम्बिनी’ र ‘सरिता’का पुराना अंकहरू पढें । त्यसपछि मेरो कोठाको बत्ती राति अबेरसम्म बल्न थाले । तकियामुनि समीर, ओमप्रकाश र वेदप्रकाश शर्माका उपन्यास लुक्न थाले । बुवाले थाहा त पाउनुभो होला, तर अब छोरा ठूलो भो के गाली गर्नु भनेर होला, मौन बस्ने नीति अख्तियार गर्नुभो । तिनताकै मैले वेदप्रकाशका ‘बर्दीवाला गुन्डा’, ‘बहुमाँगे इन्साफ,’ ‘हत्या एक सुहागिनकी’ ‘कानुनका बेटा’, ‘धर्मयुद्ध’, ‘इन्क्लाव जिन्दावाद’, ‘लल्लु’ उपन्यास पढें । ओमप्रकाश शर्माको ‘निर्दोष हत्यारा’, ‘काली बिल्ली’, ‘कातिल चेहरे’, राजहंसको ‘अधुरा पति’, सुरेन्द्र मोहन पाठकको ‘कोइ गवाह नही’, ‘घात’, ‘वारिस’ त्यतिबेलै पढें । एक दिनमा उस्तै परे दुइटा उपन्यास पढिसकिन्थ्यो । म पनि तानिएँ । यी कस्ता लेखक हुन्, यी किताब किन लेखिन्छन् भन्ने मलाई थाहा थिएन । काठमाडौं आएको निकै वर्षपछि वेदप्रकाश शर्माबारे अलिअलि थाहा पाएँ । ‘बर्दीवाला गुन्डा’को पहिलो संस्करण नै १५ लाख प्रति छापिएपछि उनी भारतमा सबैभन्दा बढी पढिनेमध्येका लेखक भएका थिए ।
वेदप्रकाश स्कुले उमेरदेखि ओमप्रकाश शर्मा, गुल्सन नन्दा, इब्ने सफी, वेदप्रकाश काम्बोजका उपन्यास पढ्दा रहेछन् । हाइस्कुल सक्ने बेलातिर उनलाई लागेछ- काम्बोजभन्दा राम्रो म लेख्न सक्छु । छुट्टीमा एकाध दर्जन उपन्यास लिएर गाउँ गएका उनी फकिर्ंदा एउटा मात्रै उपन्यास बोकेर फर्केछन्, आफैंले लेखेको । छोराले उपन्यास लेखेको थाहा पाएर बाबुले लठ्ठीले खुब पिटेछन्, ‘हिजोसम्म त पढ्थिस् मात्रै अब उपन्यास लेख्न थालिस् ? तँ बिगि्रस् ।’
जब उनले छोराले लेखेको उपन्यास पढे, वेदप्रकाशको उपन्यासकार बन्ने बाटो खुल्यो । उनका बाले नक्कली उपन्यास छाप्नमा कहलिएका लक्ष्मी पाकेट बुक्समा जंगबहादुरलाई भेटे । जंगबहादुरले एक सय रुपैयाँ थमाएर भने, ‘अरू लेख । तिमीलाई म हरेक उपन्यासको एक सय रुपैयाँ दिन्छु ।’ उनले सोचे, ‘लेखकलाई के चाहियो ? उपन्यास छापिन्छ, नाम छापिन्छ र सँगै फोटो पनि छापिन्छ ।’ १९७२ मा उनको पहिलो उपन्यास ‘सिक्रेट फाइल’ छापियो । तर नाम छापिएन, फोटो छापिएन । यो त वेदप्रकाश काम्बोजको नाममा पो छापियो । एक वर्षपछि उनै जंगबहादुरले वेदप्रकाशको नाम छापे ‘आग के बेटे’ मा तर फोटो फेरि पनि छापिएन । तर जब उनले ज्योति र माधुरी प्रकाशनसँग काम गर्न थाले, उनका उपन्यास ५० हजार र एक लाख प्रति छापिन थाले, जसमा उनको फोटो पनि छापिन्थ्यो । १९८५ मा उनले आफ्नै तुलसी पाकेट बुक्स खोले । उनका १ सय ७६ उपन्यासमध्ये ७० तुलसीबाटै प्रकाशित भएका छन् । इन्डिया टाइम्सलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘हामीले लेख्दै आएको पल्प फिक्सनको स्वर्णकाल नब्बेको दशक हो । त्यतिबेला लाखौं प्रति छापिने उपन्यास अहिले हजारमा झरेको छ ।’
एक वर्षमा दुईदेखि तीनवटा उपन्यास लेख्ने वेदप्रकाशका उपन्यासमा ‘बहु की आवाज’, ‘सब से बडा खिलाडी’ र ‘इन्टरनेसनल खिलाडी’ नामका फिल्म बनेका छन् । ‘केशव पण्डित’ भन्ने सिरियल बनेको छ । मेरठमा जन्मेका उनका लागि खुसीको कुरा के छ भने, उनको उपन्यासमा फिल्म बनाउन अब आमीर खान इच्छुक छन् ।
पछिल्लोपटक घर जाँदा बुवाको कोठामा आचार्य चतुरसेनको ‘वयं रक्षाम्’ र ‘वैशालीकी नगरवधू’ थियो । सायद् शम्भु सरले यो पढ्नुभएको छैन होला । थाहा छैन उहाँ र बुवाबीच किताब साटफेर गरेर पढ्ने बानी कहिलेदेखि छुट्यो, किन छुट्यो । शम्भु सरको अवकाशको समय कसरी बितिरहेको छ त्यो पनि थाहा छैन । अब घर जाँदा शम्भु सरलाई फेरि भेट्न मन छ । वेदप्रकाश शर्माहरूका उपन्यासको समय सकिएपछि शम्भु सर अहिले के पढ्दै हुनुहोला, त्यो पनि जान्ने मन छ । सोच्दै छु, केही किताब पनि लग्दिउँ, तर कुन ?
Posted in Memoir/society	| Leaveareply
Recent Posts	जेठी सासुको हिमाल यात्रा
मनको आँखामा सुन्दर संसार
एक करोडको प्रश्न
बसमा छैन मेरो मन…
शव-उद्यानमा एक मध्याह्न
Recent Commentsashikmalla on एक करोडको प्रश्नashikmalla on एक करोडको प्रश्नashikmalla on एक करोडको प्रश्नashikmalla on एक करोडको प्रश्नManjuido on ‘रोयल स्ट्याग वाइन’को कथाCategories	adventure/lifestyle